I-Force ▷ ➡️ Zitholele ku-inthanethi ▷ ➡️
Balanisa amandla akho oyinhloko ne-intuition nozwela.
Okushiwo yikhadi le-tarot «The Force»
La Ikhadi le-Tarot le-Force limelela imvelo, okungajwayelekile ukuthi kube yisesimweni sayo sokuqala, ihlonyiswa ubuntu bethu obuhle kunabo bonke, uhlangothi lwethu lwabesifazane, ubuntu bethu bangaphakathi. Intando nentshisekelo yemvelo yethu yemvelo akudingeki yephulwe, kepha icolisiswe futhi ilethwe ukwazi, ukuze wonke amazinga endalo ahlangane.
La Amandla omuntu wesifazane aqukethe amandla okukhohlisanoma ukuthi kungakhulisa futhi kudambise ukubambisana kwabanye, kunciphisa amandla aphazamisayo ngokuvumelanisa ukungezwani komoya wokwenza okuhle ngokuhlanganyela.
Hlukanisa kahle phakathi kwe-ego yakho nokuzithemba kwakho.
Incwadi Force ukweluleka ukuba uziphathe ngokwengqondo futhi uhlukanise intshisekelo yakho nokuhlakanipha okukhanyiselwe. Zazise ngamabomu ukuqonda kwakho, noma ngabe kungqubuzana nezifiso ze-ego yakho enenkani.
Funa futhi ulindele okufanayo nakwabanye abanamandla athile kulesisimo. Cha ungabaphonsela inselelo yokuba baphile izinga eliphakeme uma ungakazenzi ngokwakho. Ukuthonya abanye ngokubeka isibonelo sobuqotho. Ukuzethemba kwakho kuzokhula njengoba uphumelela emizamweni yakho.